डेढ अर्ब खाएर अमेरिका फरार !! – PathivaraOnline
Home > समाचार > डेढ अर्ब खाएर अमेरिका फरार !!
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)मा मर्ज भएको तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणका मुख्य नाइके अमेरिका फरार भएका छन् । डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालामा संलग्न मुख्य नाइकेसहितका व्यक्तिहरु विदेश भागेका हुन् ।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छानबिन तीव्र पारेपछि सो बैंकका पूर्व सिइओ तथा सञ्चालकहरु विदेश भागेका हुन् । घोटालामा संलग्न
बैंकका तत्कालीन सिइओ गोविन्दप्रसाद उपाध्याय अमेरिका पुगेका छन् । उनीसहित अन्य तीन सञ्चालक छानबिन सुरु भएलगत्तै विदेश भागेको सीआईबीले जनाएको छ । उक्त स्रोतका अनुसार, तत्कालीन सञ्चालकहरु वसन्त मल्ल, लोकेन्द्र कर्माचार्य र रिता वादे श्रेष्ठ विदेश भागेका हुन्। घोटालामा संलग्नहरुको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरु विदेश फरार भइसकेको सीआइबीले जनाएको छ ।
तत्कालीन एपेक्स बैंक मर्जमा जाने सहमति भएपछि सञ्चालक, सिइओ तथा कर्मचारीहरु मिलेर कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह गरी बैंकमा व्यापक अनियमितता गरेका थिए । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला पछि अनुसन्धानबाट खुल्न आएको हो । १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ अनियमितता भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । घोटालामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक, कर्मचारी, ऋणी तथा भ्यालुएटरसहित २० जनालाई सिआइबीले पक्राउ गरिसकेको छ । कर्जाको मूल्यांकनकर्ता इञ्जिनियर नरेश स्वाँर तथा कर्जा लिने ठेकेदार मनोज भेटवाल पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।